लगानीका नाममा हृवासिन सिमेन्ट र बैद्य अर्गनाइजेसनले गरे सार्वजनिक जग्गा कब्जा (भिडियो सहित) | Sagarmatha TV
लगानीका नाममा हृवासिन सिमेन्ट र बैद्य अर्गनाइजेसनले गरे सार्वजनिक जग्गा कब्जा (भिडियो सहित)
चिनियाँ उद्योग ह्वासिन सिमेन्ट र नेपाली साझेदार कम्पनि बैद्य अर्गनाइजेसन रजाइॅको नालिबेली
काठमाडाैँ । सरकारले नेपाललाई फाइदा हुनेगरी मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने ढोल बजाइरहेको छ । तर, नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी कम्पनीले भने आफूखुसी धन्दा चलाईरहेका छन् । त्यसैको एक उदाहरण हो, गाउॅ नै कब्जा गर्ने शैलीमा विदेशी सिमेन्ट उद्योग ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालीले धादिङमा मच्चाएको रजाईं ।
बालुवाटारमा रहेको ललितनिवासको सयौं रोपनी सरकारी जग्गा भू–माफियाले आफ्नो नाममा बनाएको, चुच्चेपाटीमा रहेको हायात होटलले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको लगाएत कर्तुत सार्वजनिक भइरहँदा, विदेशी लगानिको एउटा सिमेन्ट उद्योगले सयौं रोपनी जग्गा कब्जा गरेको अर्को रहस्य खुलेको छ ।
धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा चिनियाँ उद्योग हृवासिन सिमेन्ट नारायणी प्रा.ली.ले सयौं रोपनी नेपाली भूमी मिचेर लुट धन्दा मच्चाइरहेको छ । सुरज बैद्य सञ्चालक रहेको नेपाली कम्पनी, बैद्य अर्गनाइजेसन सँग साझेदारीमा काम गरिरहेको हृवासिन सिमेन्टले मापदण्ड विपरित, खोलाको धार नै परिवर्तन गरेर काम गरिरहेको छ ।
हामीलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार, उद्योगले मलेखु खोलाको १ सय २१ रोपनी जग्गा कब्जा गरिसकेको छ भने अरु सयौं रोपनी खोलाको जग्गामा आफूखुसी काम गरिरहेको छ । विदेशी उद्योगले मनलागी मच्चाउँदा पनि किन मौन भन्ने प्रश्नमा उद्योग विभागका अधिकारी, घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको र दोषी भेटिए कारवाही गर्ने बताउँछन् ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक बिनोदप्रकाश सिंहले सार्वजनिक जग्गा कसैलाई मिच्न नदिने र त्यस्तो पाइएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी नै दिए । के त्यो चेतावनी कार्यान्व्यन होला ? यो भने गम्भीर प्रश्न छ ।
विदेशी उद्योगले नेपाली भूमीमा मापदण्ड विपरित काम गरेको विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले पनि छुट्टै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अनुगमन पछि प्रमाण अनुसार, उद्योग नै बन्द गर्ने सम्मको कारवाही हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार, विरोधमा उत्रनेलाई हृवासिन सिमेन्टले दबाब र आर्थिक प्रभावमा पारेर विरोध गर्नेहरुलाई पाखा लगाउने गरेको छ । यतिमात्र होइन, हृवासिन सिमेन्ट र नेपाली साझेदार सुरज बैद्यले केही जनप्रतिनिधि र पहुँचवाला स्थानीयलाई हातमा लिएर सरकारी जग्गा आफूअनुकुल प्रयोग गरिरहेका छन् । यो विषय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा समेत पुगेको छ । समितिले अहिले हृवासिन् सिमेन्टको सम्पुर्ण फाइल मगाएर छनविन सुरु गरेको छ । अब गल्ती गर्नेले कुनैपनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने समितिकी सभापति कल्याणी खड्काको दाबी छ ।
समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लगाएत सरोकारवाला मन्त्रालयलाई कारवाही गर्न भन्दै पत्राचार समेत गरिसकेको छ । हृवासिन सिमेन्टका नेपाली साझेदार, सुरज बैद्यले भने यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । नेपाली भूमीमा आएर सयौं रोपनी जग्गा कब्जा गरि मापदण्ड विपरित आफूखुसी काम गर्ने उद्योगलाई कहिले हुन्छ कारवाही ? आम नागरिकको चासो र प्रश्न हो यो ।